Brezila: Mpihira Fanta-daza Manome Voninahitra Ilay Reniny Tsy Manam-paharoa · Global Voices teny Malagasy
Nandika (en) i Yohana de Andrade
Voadika ny 14 Jona 2012 4:19 GMT
Telopolo taona taorian'ny nahafatesan'i Elis Regina, iray isan'ny endrika malaza amin'ireo mpiantsehatra mpiangaly mozika Breziliana, ny zanany vavy Maria Rita, mpihira nanao izay hahatafita ny tenany tamin'ny herin'ny tena, dia niaka-tsehatra hihira ireo hiran'ny reniny, sambany hatrizay nihirany. Efa manana folo taona mahery nihiràna sahady i Maria Rita, nahalafo maherin'ny iray tapitrisa tamin'ny rakikirany voalohany.
Ilay fitetezam-paritra ‘Viva Elis’ na ‘Ho Ela Veolan i Elis’, ahitàna kaonseritra maimaim-poana dia nitety ireo tanan-dehibe Breziliana, Porto Alegre, Recife, Belo Horizonte, São Paulo sy Rio de Janeiro, nofaranana ny 13 May, ho fanamarihana ny Andro natao ho an'ny Reny. Nanjary lohahevitra noresahana be tao amin'ny Twitter [pt] ilay fitetezam-paritra, na tao Brezila na nanerana izao tontolo izao.
Elis Regina, fantatra amin'ny hoa ‘Pimentinha’ na ‘Little Pepper’ noho ny fihetsiny sahisahy, dia nampiseho fomba fiakarana an-tsehatra mafonja, mahery vaika izay nanjary lasa marika amantarana azy. Voalohany nahafantarana ilay mpihira ny hirany hoe ‘Arrastão’ izay nahazo ny loka Brazilian Popular Music Festival [pt] Fetiben'ny Mozikam-bahoaka Breziliana tamin'ny 1965.
Jéssica Rodrigues, avy ao amin'ny vavahadin-seraseran'ny bilaogy Maria Rita, dia manoritsoritra [pt] ny fivaivain'ny fanehoan-kevitry ny mpanatrika tao Belo Horizonte tamin'ny 8 Aprily 2012:
Nahafahan'ireo andian-taranaka samihafa nihaona ilay hetsika, tamin'ny alalan'ny fihaonan'ireo mpankafy an'i Elis Regina sy Maria Rita. Tao São Paulo, Maria Rita niteny tamin'ny olona [pt] fa tamin'ny alàlan'ny mozika no tena nahalalany tsara ny reniny, fony mbola efatra taona monja i Rita no maty i Elis. Ireo mpankafy an'i Maria Rita koa dia tamin'ny alàlan'ny feon'ny zanany vavy no nahalalany ny asan'i Elis, araka ny bitsika nalefan'i Carla Santos [pt] mpampiasa twitter, ho an'i Maria Rita:
Fefeu, avy amin'ny bilaogy Clube da MPB, dia manoritsoritra [pt] ny nitrangan'ny zavatra toy izao tao São Paulo:
Nameno ny tambajotra sosialy ireo sary nalain'ny mpankafy taorian'ilay kaonseritra. Ilay mpampiasa Twitter, Dudinha Sales [pt], dia nizara sary iray ahitàna irao vahoaka be tao amin'ilay kaonseritra tao Recife:
Carol Mendonça nandrakitra [pt] ny hafanànan'y seho tao São Paulo:
Hatramin'ny fandefasana SMS sy fakàna sary, ireo mpankafy an'i Maria Rita sy Elis Regina koa dia nandrakitra anaty lahatsary an'ilay fitetezam-paritra. Ny fikarohana ny teny hoe ‘Maria Rita Elis Regina’ dia nanome raki-tahiry ampolony maro. Ilay mpampiasa YouTube, ‘smaila’, dia nampakatra lahatsarin'i Maria Rita miresaka mikasika ny fifandraisany amin'ny hiran'i Elis Regina.